Baarlamaanka Ethiopia oo maanta ceeb dhex joojiyey xukuumadda R/W Kheyre
Thursday July 05, 2018 - 14:26:26 in Wararka by Ali Adan
Kulan ay maanta magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ku yeesheen xildhibaannada baarlamaanka ee dalkaasi ayaa waxay si rasmi ah liiska argagaxisada uga saareyn saddex urur.
Baarlamaanka ayaa u codeeyey in wixii maanta ka dambeeya aanay liiska argagaxisada ku jirin ururada kala ah ONLF, OLF iyo Ginbor 7.
Horey waxaa Ururuadan liiska uga saaray golaha wasiirada ee dowladda Itoobiya, iyadoo ulajeedka uu yahay in si nabadeed loo wadahadlo.
Haddaba go’aanka Baarlamaanka Itoobiya uu qaatay ayaa ceyb weyn ku ah Xukuumadda xasan Cali Kheyre oo iyada horey Ururkaan ugu dartay Liiska Argagixisada kadib markii Itoobiya loo dhiibay Cabdikariin Shiikh Muuse Qalbi Dhagax.
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo kulan yeeshay markii Qalbi Dhagax loo dhibay isla markaasna ay cirka isku shareertay xiisadda ka dhalatay ayaa tilmaamay in Qalbi Dhagax iyo ONLF ay dhibaato ku yihiin amniga labada dal.
Waxaa Macquul ah in go’aanka Baarlamaanka Itoobiya uu qaatay ujeedkiisa uu yahay in lagu fadeexeeyo Golaha Wasiirada Xasan Cali Kheyre isla markaasna dhex laga istaajiyo xiisad cusub oo siyaasadeed.
Ceebta Xukuumadda heysato ayaa ah inay Argagixiso ku tilmaamtay urur Soomaaliyeed isla markaasna ay maanta dowlad cadow ku ah Soomaaliya ay go’aansato inuusan ururkaan aheyn argagixiso.
Ma jirto go’aan u furan xukuuamadda Soomaaliya, waxaana laga yaabaa inay arrintaan ku keento cadaadis cusub oo kaga imaanayo mucaaradka dowladda oo iyagu ah mar kasta jaanis gaad.
Haddaba halkaan hoose ka akhriso go’aankii kasoo baxay Golaha Wasiirada 6 September 2017.
4) Golahu waxuu mar kale hoosta ka xarriiqay heshiiyadii iskaashi ee ay Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladda Federaalka Ethiopia ay kala saxiixdeen sida heshiiskii 07dii Juun 2015kii iyo heshiikii 2dii May ee 2016 oo tilmaamaya in dhan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda. Heshiisyadan waxey si cad u qeexayaan "In cadowga labada dhinac ee Al-Shabaab iyo Jabhada ONLF ay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal ay iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan”.